Thunderbird 15 Beta 1 oo leh naqshad cusub iyo sheeko isku dhafan | Laga soo bilaabo Linux
Thunderbird 15 Beta 1 oo leh naqshad cusub iyo sheeko isku dhafan
Waxaan u hayaa war fiican dadka isticmaala Thunderbird, waana taas, in kastoo Mozilla ha go'aansaday inaan dhinac iska dhigno mashruucan cajiibka ah, xoogaa horumar ah ayaa wali lagu darayaa sida aan hoos ku arki karno.
Mawduuca Australis in aan dhawaan arki doonno gudaha Firefox Hore ayaa loogu daray Maareeyaha Boostada oo siinaya muuqaal miyir-qab leh oo qurux badan. Intaa waxaa sii dheer, taageero ayaa loogu daray Ubuntu Mid.
Riwaayad kale waxaan horay u aragnay in yar kahor, waana inaynu haddaba ku raaxeysan karno farriinta qaab isku dhafan Maamulaha Boosta. Waxaan isticmaali karnaa xisaabaadkayaga Facebook, Gtalk, Twitter, XMPP y IRC.
Xisaabta Twitter, waxaa jira waxyaabo ay hubaal dib dambe u nadiifin doonaan, maaddaama interface-ku uusan ahayn sida ugu macquulsan sidii la rabay, waana la jeclaan lahaa haddii ay si dhammaystiran u buuxiso magacyada kuwa raacsan iyo saaxiibbadeen.
Inta soo hartay si aad u wanaagsan ayey u shaqeysaa, oo sida aad u aragto, dhammaan xiriiradayada waxaa lagu dhex daray qeybta dhinaca, iyadoo lagu muujinayo astaan ​​borotokoolka ama koontada aad isticmaaleysid.
Maxaad u malaynaysaa waxaas oo dhan? Si la yaab leh u isticmaalka dhammaan xisaabaadka IM-ka ee furan ma dhaafo 110MB bilowga .. Waa inaan tijaabiyo iyaga in muddo ah si aan ula socdo RAM-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Thunderbird 15 Beta 1 oo leh naqshad cusub iyo sheeko isku dhafan
Laptop-ka aan xiisaha u leeyahay ee aan ku isticmaalo Thunderbird waa war wanaagsan waxaana kaliya oo aan doonayaa in aan furo thunderbird wax kale, halkii halkan aad igu aragtay ay ka furan tahay pidgin, cariish iyo icedove.
waad ku mahadsantahay warka waxaadna sugtaa nooca ugu dambeeya oo soo baxa.
Fuck… kaliya markii bil ama laba ka hor aan joojiyay isticmaalka Thunderbird… HAHAHA
Waxaan kaa sugeynay inaad joojiso isticmaalkeeda si aad u geliso hagaajinta cusub: trollface:
Ku jawaab trolltux
Waxaan u isticmaalaa gmail dhammaan akoonadeyda. Waxaan ka joojiyay onkod shimbireed maxaa yeelay nooc kasta oo cusub wuu cuslaaday.
Waa war aad u weyn shaki la'aan, waxaan ku fikiray inaan u gudbo horumar laakiin taasi waa wax kale
Wow, tani waxay u egtahay mid weyn oo ah Haddii Icedove uu helo cusbooneysiinta Tijaabada (taas oo aanan u malayn maayo) way fiicnaan lahayd 😛 Haddii kale, hoos bogga:
Waan ka shakisanahay. Gudaha Debian, barafka e Qoolley Waxay u aadaan qeybta 10 oo ay ku jiraan qaboojinta xirmooyinka, shaki badan ayaan qabaa, inay aad uugu jiraan.
Waxaan horeyba kuugu sheegi jiray Elav, in mawduuca Thunderbird wax walboo aan wali lagahadlin, wararka iyo horumarka tooska ah ee Mozilla waxay gaarayaan nooca 16, laga bilaabo markaa waa meesha aad ku arki doontid sida ay bulshada ujirto, laakiin loogu talagalay waxa aad ka aqrisay liisaska dirista waxaa jira mowduuc si cadaalad ah loo abaabulay iyo dhowr horumariyayaal kuwaas oo durbaba bilaabay inay hagaajiyaan cilladaha iyo wixii la mid ah. Waan sii wadi doonaa taageerida Thunderbir oo isha ayaan ku hayn doonaa liisaska si aan u arko waxa cusub iyo sida aad u caawin karto.
Dhanka kale, inkasta oo waqtigaas aysan u muuqan muuqaalka ugu habboon, runtii waxtar ayey u leedahay bey'adaha ganacsiga iminkana e-maylkeyga Jaamacadda ayaa ku socda gmail waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah.
Akhbaar aad u fiican, wali waxaan u maleynayaa in Thunderbird uu yahay maareeyaha akoonka emailka ugu fudud uguna dhameystiran halkaas.
Thunderbird waa wax weyn, aadna u fudud in la qaabeeyo oo aad waxtar u leh
Waxa aan jeclaan lahaa inay sameeyaan ayaa ah in markay furayaan barnaamijka ay i weydiistaan ​​magaca iyo lambarka sirta ah sida Pidgin ama barnaamijyada kale ee fariimaha degdegga ah la sameeyo si marka hooyaday rabto inay u aragto farriinteeda aysan u arag fariimaha ay ii soo dirayaan tan iyo markii ay qaar baa aad u khaas ah waana inaan daawadaa sanduuqa sanduuqa.
Hagaag, waxaad sameyn kartaa labo shay, ama waxaad gali kartaa erayg sir ah Thunderbird, ama waxaad u abuuri kartaa astaan ​​ka duwan hooyadaada iyo marka aad bilaabeysid barnaamijka had iyo jeer weydii nooca astaamaha lagu bilaabayo.
@Azzazel: sawiro ma jiraan!?
Weligey ma arag wax ka foolxun kana raaxo badan Thunderbird 😛
Macaamiisha boostada fudud iyo kuwa shaqeynaya waxaa jira Claws (heer sare ah) iyo Sylpheed, horeyba wey u cuslaayeen inkasta oo aan wax badan oo KMail ah (oo aanan runtii aad u jeclayn laakiin waxay ku soo biirtay Kontact Suite ee KDE SC) oo horeyba u cuslaa shaki ayaa ah macmiilka ugufiican ee fariinta ah + PIM ee GNU / Linux, Evolution, Outlook clone haddii aad rabto - markiisaba, macmiilka ugufiican boostada iyo maamulaha PIM ee jira.
Masochistayaasha waxaa sidoo kale u yaal Pine iyo Mutt 🙂
Sidoo kale, iyo intii aan doonayay inaan isticmaalo macmiilka boostada maxalliga ah, aad ayaan ula qabsaday barta Gmail-ka oo aan runta ka hadalno: yaa aan lahayn biraawsar furan markasta maalmahan? Xitaa haddii aanaan adeegsan, biraawsarku waa _walba_ furan yahay, taasi waa sida ay tahay, yeelashada macmiil maxalli ah maanta wuxuu u adeegaa wax ka badan wax kasta oo lagu sameeyo keydka xisaabaadka email-keena oo aan awood u yeelan karno inaan akhrino emayllada markaynaan isku xirnayn ...
¿Thunderbird ka foolxun Claws Mail y Sylpheed? O_O
Waa inaan kaa soo hor jeestaa! x'D
Waa maxay mawduuca GTK ee taasi, ma u eg yahay SolusOS? Oo ka warran mawduuca daaqadda daaqadda? Si xun ayaan ugu baahanahay, labada shay 😉
Hehehe the Gtk theme waa Zukitwo-Dark oo isku mid ah Xfwm 😀
Noocaani si fiican ayaa loo muujiyey, waxaan jeclaan lahaa in emayllada ay abaabuli karaan kooxo / dad (ugu yaraan markaan joojiyo isticmaalkeeda), markaa su’aashu way fududaan lahayd.
Laakiin guud ahaan waxaan u arkaa mid aad u fiican. +10
Ku jawaab faustodF
Waxay u egtahay xiiso
feylku uma yimaado inuu fuliyo ama maxay tahay?
Ubuntu WebApps waxay u keentaa codsiyada websaydhka miisaska
[Archlinux] Dhaxalka GRUB wuu ka baxsan yahay taageerada